Jehova bụ Eze dị nsọ
Ọ nọ n’ocheeze dị n’elu ndị cherob (1)
Chineke gbaghaara ndị ya, taakwa ha ahụhụ (8)
99 Jehova abụrụla Eze.+ Ka ndị dị iche iche maa jijiji. Ọ nọ n’ocheeze dị n’elu* ndị cherob.+ Ka ụwa maa jijiji. 2 Jehova bụ onye ukwu na Zayọn,Ọ kakwa ndị niile elu.+ 3 Ka ha too aha gị dị ebube+N’ihi na e kwesịrị ịna-atụ egwu aha gị, aha gị dịkwa nsọ. 4 Chineke bụ nnukwu eze nke ikpe ziri ezi na-amasị.+ I meela ka a mata ihe bụ́ ihe ziri ezi. I meela ka a na-ekpe ikpe ziri ezi ma na-eme ezi omume+ na Jekọb. 5 Toonụ Jehova Chineke+ anyị, kpọọkwanụ isiala n’ihu ya.*+ Ọ dị nsọ.+ 6 Mosis na Erọn so ná ndị nchụàjà ya,+Samuel sokwa ná ndị na-akpọku aha ya.+ Ha kpọkuru Jehova,Ọ zakwara ha.+ 7 O si n’ogidi ígwé ojii gwa ha okwu.+ Ha echefughị ihe ndị o chetaara ha, ha debekwara iwu ndị o nyere ha.+ 8 Jehova Chineke anyị, ị zara ha.+ Ị gbaghaara ha mmehie ha,+Ma ị tara ha ahụhụ* maka mmehie ha.+ 9 Toonụ Jehova Chineke anyị,+Kpọọkwanụ isiala* n’ugwu nsọ ya,+N’ihi na Jehova Chineke anyị dị nsọ.+
^ Ma ọ bụ “n’ebe ọ gbakwasịrị ụkwụ.”
^ Na Hibru, “ị bọrọ ọbọ.”
^ Ma ọ bụ “Feekwanụ ya.”